နေဝင်ချိန်သည်ထိုနေ့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိနေရောင်ခြည်၏ပုံရိပ်သည်ကောင်းကင်မှ၎င်း၏နွေးထွေးသောအရောင်များကိုထုတ်ပေးသည့်အခါခရီးသွားရာတွင်ရှာဖွေလိုက်သောပုံရိပ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာသည့်အမှတ်တရများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိတောင်တန်းများ၊ သဲကန္တာရများတွင်ဖြစ်စေ၊ မြို့တွင်း၌ဖြစ်စေရုပ်ရှင်နေဝင်ချိန်ကိုပျော်မွေ့ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာအဘယ်နည်း။
Morondava၊ Belo နှင့် Morondava မြို့များကိုဆက်သွယ်ထားသောလမ်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှဆုံးနေဝင်ဆည်းဆာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်း? လမ်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသောလိမ္မော်ရောင်ကောင်းကင်နှင့်အတူ Baobabs အတန်းများသည်အာဖရိကရှိစွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရှုခင်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။
Baobab သည်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဤကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်သာမြင်နိုင်သည်။ ထိုသစ်ပင်များသည်နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ရှိသောသစ်ပင်များဖြစ်ပြီးထူထဲ။ တို။ မများပြားသောအကိုင်းအခက်များနှင့်ရေသိုလှောင်ရန်ပုလင်းပုံသဏ္unkာန်ရှိသည်။ သူတို့ကအမြင့် ၂၀ မီတာကျော်တက်နိုင်တယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစပြီး Morondava နားကဒီprotectedရိယာကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်။
အာဖရိကမှထွက်ခွာရန်မလိုဘဲတိုက်နယ်ရှိနေဝင်ချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သော Kilimanjaro National Park ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တန်ဇန်းနီးယားမြောက်ပိုင်းတွင်ကင်ညာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော Kilimanjaro တောင်သည်ရှေးဟောင်းမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်အမြင့်ဆုံး ၅,၈၉၅ မီတာရှိသောတိုက်ကြီးတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့်ဆဗာနာလွင်ပြင်အလယ်၌မြင့်တက်လာပြီးနေဝင်ချိန်တွင်လည်းထူးခြားသည့်မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရသည်။
Kilimanjaro ရဲ့ထိပ်ကိုတက်ခြင်းဟာတောင်တက်တာကိုစိတ်ထက်သန်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်နေရင်တန်ဇန်းနီးယားမှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ညနေခင်းတွင်နေရောင်ခြည်ဝင်ရန်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသောအခါသဘာဝတရားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ရိုးရှင်းစွာအမှော်!
၀ တီရမ်သဲကန္တာရရှိကမ္ဘာပေါ်ရှိနေဝင်ချိန်ကိုတွေ့မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာနောက်တစ်ခုကိုမျက်မြင်တွေ့ရန်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားကြသည်နေသည်ထွက်သွားပြီးမှိန်နေသောအလင်းရောင်ကရှုခင်းကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေသည့်အခါ ပို၍ ပင်အဆင်းလှသောအလှဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်း၏ထူးခြားသောမှတ်တမ်းက Valle de la Luna အမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ညနေခင်းအလင်းရောင်ကကျွန်ုပ်တို့အား Wadi Rum ၏အခြားမျက်နှာများနှင့်အရောင်များ၊ ပုံသဏ္reliefာန်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပြသထားသည်။ ဤတောကန္တာရတွင် Lawrence of Arabia၊ Mars သို့မဟုတ် Red Planet စသည့်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကားများကိုရိုက်ကူးထားခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မြင်ကွင်းကြီးမှာမြင်တာဟာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပေမယ့်လူကိုယ်တိုင်လုပ်တာကမမေ့နိုင်စရာထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲ။
ရုပ်ရှင်ရုံအကြောင်းပြောရရင်အီဂျစ်ကိုလှပတဲ့နေ ၀ င်ချိန်ကိုစဉ်းစားဖို့ရုပ်ရှင်တစ်ခုအနေနဲ့မမေ့နိုင်ဘူး။ ယင်း၏ပိရမစ်များ၊ ရှေးဟောင်းကမ္ဘာ၏အံ့ဖွယ်ခုနစ်ခုအနက်မှတစ်ခုတည်းသာလျှင်၊ ဤခမ်းနားထည်ဝါသောလူသား၏အံ့ work ဖွယ်ရာအလုပ်ကိုအံ့ to ရန်မက်လုံးမလိုအပ်ပါ။
ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူတွေဟာကောင်းကင်ကိုစောင့်ကြည့်သူတွေပါ။ ပိရမစ်များ၏တည်နေရာသည်တိုင်းပြည်သည်နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဲကန္တာရရှိရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများနှင့်နေဝင်ချိန်ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်အခြားကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ထောင့်တွင်ရှာ။ မရနိုင်သောလျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အရာဖြစ်သည်။
ပို၍ တိတိကျကျပြောရလျှင် Zaragoza နှင့် Teruel ၏နယ်နိမိတ်ရှိ Aragon တွင် Gallocanta lagoon သည်ရပ်ကွက်အတွင်းအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးစပိန်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ နို ၀ င်ဘာလဆီသို့၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသောကရိန်းများသည် Gallocanta ၏မိုးကောင်းကင်မှထူးခြားသောမြင်ကွင်းတွင်ပျံသန်းသည်ဥရောပမြောက်ပိုင်းမှငှက် ၃၀၀၀၀ အထိသည်သူတို့၏ရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းဖြင့်အတူတကွစုဝေးကြပြီး၎င်းသည်တိုက်ကြီး၏တောင်ပိုင်းတွင်ပူနွေးသောအပူချိန်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တာ၏နောက်ဆုံးအလင်းသည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တောက်ပနေသောကောင်းကင်ပြာပေါ်ရှိထိုမိုcloud်းတိမ်ငှက်ပုံသဏ္etteာန်သည်တန်းတူပင်မရှိဘဲသဘာဝ၏မျက်မှန်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ornithology ၏ချစ်သူများအဘို့အစစ်မှန်တဲ့အံ့သြစရာ။ Gallocanta lagoon ၏နေ ၀ င်ချိန်နှင့်ဤတွင်သူတို့ရပ်တန့်သွားသည့်အခါထိုငှက်များမှထွက်ပေါ်လာသောဆူညံသံများကိုမမေ့နိုင်ပါ။
ကာရစ်ဘီယံအကြောင်းအိပ်မက်မက်သည့်အခါကောင်းမွန်သောသဲသောင်ပြင်များ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောစွန်ပလွံပင်များနှင့်ကြည်လင်သောကြည်လင်သောပင်လယ်ရေမျက်နှာသွင်ပြင်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဒတ်ခ်ျကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းပြည်ဖြစ်သောအရုဘာတွင်ထိုဖော်ပြချက်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကာအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်သောနေဝင်ချိန်များကိုထည့်သွင်းရမည်။
ယင်း၏ကမ်းခြေများမှညနေခင်းကိုစဉ်းစားခြင်းသည်ကျွန်းပေါ်ရှိသင်၏နေထိုင်မှုမှသင်နှင့်အတူယူဆောင်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သဲသောင်ပြင်ပေါ်၌လဲလျောင်းနေခြင်းသို့မဟုတ်ပင်လယ်ပြင်၌အချို့သောအားကစားလေ့ကျင့်ခြင်းများပြုလုပ်သောကြောင့်သဘာဝအလှအပကိုအကောင်းဆုံးခံစားနိုင်ပြီးသင်၏စိတ်ကိုဖြတ်ပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ စကားမစပ်! Aruba ၏ပင်လယ်ကြမ်းပြင်နှင့်၎င်း၏ရောင်စုံသန္တာကျောက်တန်းများသည်သင်၏အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းသင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အခြားလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ